किन राख्छन् महिलाहरु परपुरुषसँग सम्बन्ध ? यस्ता छन् कारण! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
किन राख्छन् महिलाहरु परपुरुषसँग सम्बन्ध ? यस्ता छन् कारण!
१३ आश्विन २०७८, बुधबार ००:००
मानिसको जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षण भनेको जन्म,मृत्यु र विवाहलाई मानिन्छ । अहिलेको बर्तमान समयमा सम्वन्धलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिर्वतन भएको छ ।
सबै भन्दा परिर्वतन आएको सम्वन्ध भनेको हाम्रो समाजमा विवाह हो । अहिलेको बर्तमान समयमा विवाह एकदमै कमजोर सम्वन्ध बनेको छ ।किनभने कुन बेला त्यो सम्वन्ध सकिने हो थाहा हुदैँन ।
पहिला भन्ने गर्दथे विवाह भनेको एकपटक मात्रै गर्ने गरिन्छ तर अहिले त्यो भनाई विस्तारै परिर्वन हुदैँ आएको छ । समाज जति परिर्वतन हुदै आएको छ त्यति त्यसमा असर पर्दै आएको हामीले पाउँछौ ।
नेपालमा पनि अहिले एक महिनामा एक जिल्लामा ५०० भन्दा बढी सम्वन्ध विच्छेदका लागि निवेदन दर्ता हुन लागेको छ । यसलाई केलाउदा पनि हाम्रो समाज कता तिर जादैँ छ भन्ने प्रश्न खडा हुने गर्छ ।प्राय मानिसले विवाह गरेपछि वैवाहिक सम्बन्धलाई बचाउन र राम्रो बनाउन मै बढी जोड दिइन्छ ।
वैवाहिक सम्बन्ध यस्तो सम्बन्ध हो जुन संसारका हर कोहिका लागि जीवनभरीको साथ हो । जसमा विश्वास र माया भरिएको हुन्छ ।पछिल्लो समयमा महिला पुरुषका विवाहेत्तर सम्बन्धले धेरै वैवाहिक सम्बन्धहरु आक्रान्त भएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारी, पश्चिमा रहनसहन जस्ता विभिन्न कारण श्रीमान-श्रीमती एक अर्काप्रति चासो नदेखाउने, एक अर्काको भावनाको कदर नगर्ने जस्ता समस्याले अन्ततः कतिपयको सम्बन्ध विच्छेद पनि भएको छ ।
विवाहवेत्तर सम्बन्ध बनाउन पुरुषवादी समाजमा पुरुष नै हाबी भएतापनि एक अध्ययनले महिला पनि विवाहवेत्तर सम्बन्ध राख्न चाहान्छन् भन्ने देखाएको छ ।
खराब श्रीमती पर्यो भने चौपटै हुन्छ । विवाहवेत्तर सम्बन्ध बनाउन पुरुषवादी समाजमा पुरुष नै हाबी भएतापनि एक अध्ययनले महिला पनि विवाहवेत्तर सम्बन्ध राख्न चाहान्छन् भन्ने देखाएको छ ।
अध्ययनमा उल्लेख भएअनुसार ४० वर्ष कटेका महिलाको ठूलो संख्या विवाहेत्तर सम्बन्धमा रहन्छन् । अध्ययनले बताएअनुसार ४० वर्षपछि अर्को सम्बन्धमा रहनुका विविध कारणहरु छन् ।
कतिपय महिला पुरुषहरु ४० वर्षपछि आफ्ना पार्टनरबाट यौन सन्तुष्टी नपाउने भएकाले दोस्रो पुरुष महिलातर्फ आर्कषित हुने गरेको अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ । कतिपय महिलाहरु आफ्नो बिबाह पच्चास नै विवाहेत्तर सम्बन्धमा समेत रहन्छन् ।
पतिको बानीमा परिवर्तन
पुरुषको काँधमा विवाहपछि थप जिम्मेवारीको बोझ समेत थपिन्छ । थपिएको जिम्मेवारी सँगसँगै रोमान्स र समय दुवैमा पनि कमी आउँछ । जसको कारण महिला अर्को दोस्रो पुरुषसँग आर्कषित हुन्छन् । श्रीमती र छोराछोरीको जिम्मेवारी उठाउने क्रममा पुरुषहरु श्रीमतीलाई वेवास्ता गर्न पुग्छन् ।
बिवाहछी घरमा सधैँ झगडा, अशान्ती हुन्छ भने पनि महिलाहरु बाहिर सम्बन्धको विकल्प रोज्छन् भन्ने अध्ययनले देखाएको छ भने सबै महिलामा यस्तो नभई अक्सर मात्र हुने गरेको छ ।
सानै उमेरमा वैवाहिक जीवनमा बाँधिएका महिलाहरु विवाहपछि उनीहरु अनेक सामाजिक बन्धनमा रहनुपर्ने बाध्यता रहेको हुन्छ । उनीहरुको जीवन अर्कै मोडमा आइपुगेको हुन्छ भने आफ्नो जीन्दगीमा अमूल्य समय खेर गएको अनुभव पनि गर्छन् । जसको कारण उनीहरु विवाहेत्तर सम्बन्धतर्फ उद्धत हुने गरेका छन् ।
विवाहपछि आउने अनेक समस्या र परिवर्तनपछि महिलाहरुमा बच्चा भइसकेपछि झनै धेरै परिपक्कता आइसक्छ । तर आफ्ना पति प्रतिको विश्वास भने कम हुँदै जान्छ । उनीहरु बच्चा भइसकेपछि पतिले आफूलाई वेवास्ता गर्छ भन्ने सोच्छन् र बाहिर साथी बनाउन तिर लाग्छन् ।
महिलाहरु अग्लो कद, हृष्टपुष्ठ शरीर र चम्किलो अनुहार भएको पुरुषसँग छिट्टै आर्कषित हुने भएकाले आफ्नो पार्टनरमा भएको खुबीको वेवास्ता गर्छन् भने दोस्रो पुरुषको सानो सानो कुरामै आर्कषित भइहाल्छन् ।एजेन्सी
प्रकाशित मिति: Sep 29, 2021
प्रेम सम्वन्धमा रहदा मानिसलाई हुन्छन् यी ९ फाइदा जान्नुहोस् !
मायाँ हाम्रोलागि अति आवश्यक पर्ने चिज हो । मानिस मायाँ विना बाच्न सक्दैन । मायाँ
आखाँमा लाग्ने शापू कस्तो रोग हो ? जान्नुहोस् ! यसका लक्षण र बच्ने उपायहरु
आँखामा लाग्ने रोगमध्ये शापू पनि एक रोग हो । जुन रोग आखाको लागि एकदमै खतरा
दादलाई ३ दिनमा नै निको पार्ने चमत्कारिक घरेलु औषधीको बारेमा जान्नुहोस् !
दाद सामान्यतया सबैको शरीरमा आउने गर्छ । दाद जुनसुकै उमेर समूहका मानिसमा पनि देखिने समस्या
किन हुन्छ सप्नादोष ? समाधानको लागि यस्ता छन् उपायहरु !
निदाइरहेको बेलामा यौनसम्बन्धी सपना देख्नु स्वाभाविक प्रक्रिया नै हो। त्यसो त यौन सपनाको क्रममा स्वप्नदोष
महिलाको यौन अंगको मुख्य भागमध्ये पाठघर पनि एक हो । जब महिलाको पाठेघरमा समस्या आउँछ
हाम्रो आँखा किन फरफराउँछ आँखा? यस्ता छन् कारण !
हाम्रो समाजमा आँखा फरफराउनुलाई हाम्रो समाजमा हेर्ने तरिका र बास्तबिकता फरक रहेको छ । हाम्रो